कोरना भाइरसबाट जोगीन सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव – Shasankhabar
कोरना भाइरसबाट जोगीन सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
चितवन । कोरोना भाइरस रोकथामको लागि चिकित्सकहरुले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन । अहिलेनै चितवनमा जोखिम नदेखिएको भएपनि पूर्व सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरुले आग्रह गरेकाछन् ।
अदव मिडिया नेटवर्कले चिकित्सकसंग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चितवन जोखिममा नरहेपनि पूर्व सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको चिकित्सकको भनाई रहेको थियो । नेपालमा नोबेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति एक जना काठमाडौँमा देखिएपनि उनलाई उपचारपछि सञ्चो बनाइएको छ ।
चिकित्सकले नोबेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित वा शंकास्पद बिरामीलाई चौध दिनसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने चुनौती रहेको बताएका छन् । मानव शरीरमा नोबेल कोरोना भाइरस प्रवेश गरेपछि त्यसको लक्षण देखा पर्न दसदेखि चौध दिन लाग्ने भएकोले चौध दिनको चुनौती चानचुने नभएको उनीहरुले बताएकाछन् ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख बरिष्ठ फिजिसियन डा. प्रकाश खतिवडाले कोरोना भाइरसको जोखिम उत्तिकै रहेकोले पूर्वतयारी कार्यक्रम र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस भएकोले बढी भीडभाड हुने ठाउंँमा छिटो संक्रमण फैलने सक्ने बताउदै उहाँले यात्रा गर्दा,मेलामहोत्सवमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र हात समेत मिलाउँदा सतर्क हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
विश्वमा २९१ वटा भाइरस पत्ता लागेको छ । ती मध्यकै एउटा कोरोना हो । स्वासप्रश्वासबाट यस्ता रोग ८० प्रतिशत सर्दछ । छिमेकी देश चीनको उहान शहरमा पहिलोपटक गत डिसेम्बरमा देखा परेको नोबेल कोरोना भाइरस नेपालका चिकित्सकहरुका लागि पनि टाउकोदुखाईको विषय भएको छ ।
त्यस्तै अर्का बरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले सतर्कता अपनाए जोगिन सकिने बताउनुभयो । नयाँ भाईरस नभई रुप मात्र नयाँ भएको बताउदै उहाँले मास्कका प्रयोग र हात नमिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.कृष्ण पौडेलले सबैको सहकार्यबाट मात्रै सजगता अपनाउन सकिने सुझाव दिएका छन । चिकित्सकका अनुसार ८० प्रतिशत भाइरस श्वासप्रश्वासबाट सर्ने गर्दछ ।
वर्डफ्लुजस्तो भाइरस पनि कुखुराबाट हुने गरेकाले कुखुरा तथा कुखुराजन्य उत्पादनबाट यसको संक्रमण फैलने चिकित्सकको भनाइ छ । पोल्ट्रीको पकेट क्षेत्र भएकोले संक्रमणको जोखिम चितवनमा उत्तिकै रहेको चिकित्सकहरुले बताएका हुन् । प्राथमिक उपचार गर्न चितवन सक्षम भएको चिकित्सकहरुले दावी गरेका छन् ।
चोरीका मोबाइलसहित दुई जना पक्राउ